MetaTrader ရှိ ဆိုင်းငံ့အော်ဒါများ
ရောင်းဝယ်သူ၏ လျှို့ဝှက် လက်နက်: ဆိုင်းငံ့ အော်ဒါများ
ဈေးကွက်ကို ၎င်းကမ်းလှမ်းသည့်ဈေးနှုန်းနဲ့ မဝင်ရောက်ချင်သည့် အခြေအနေများရှိတတ်ပါသည်။ အကြောင်းပြချက်က မတူနိုင်ပါဘူး။ ဥပမာ အတွဲတစ်ခုကို ဈေးနှုန်းအနိမ့်နဲ့ဝယ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို သိပြီး၊ သင်စောင့်ရုံပါ။ ဒါမှမဟုတ် ဈေးနှုန်း ထပ်မံဦးတည်မည့်လားရာကို မသေချာပေမယ့် သေချာတဲ့အဆင့်တစ်ခုကို ရောက်မည်ဆိုတာ သိရင်တော့၊ ၎င်းထပ်မံဦးတည်ရာသည် ရှင်းလင်းပါလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့် သင်ဘာလုပ်သင့်သလဲ? မော်နီတာရှေ့မှာထိုင်ပြီး၊ ဈေးနှုန်းအဆင့် သင်လိုချင်တဲ့အခြေအနေရောက်တဲ့ထိ စောင့်မလား?သေချာတာကတော့ ဘယ်လုပ်လိမ့်မလဲ။ ဆိုင်းငံ့အော်ဒါများ သင့်အတွက်ဖန်တီးပေးထားပါတယ်!
ဆိုင်းငံ့အော်ဒါ နှစ်မျိုးရှိပါသည်။ သူတို့ကတော့ ကန့်သတ်ထားသည့် အော်ဒါများနှင့် ရပ်ဆိုင်း အော်ဒါများပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရောင်းဝယ်သူတစ်ဦးမှ ရောင်းမလား၊ ဝယ်မလားဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အမြဲချရသည့်အလျှောက်၊ ကန့်သတ်ထားသော အော်ဒါများနှစ်မျိုးနှစ်စားရှိသည်မှာ ယုတ္တိတန်ပါသည်: အဝယ် လစ်မစ်နှင့် အရောင်း လစ်မစ်။ ရပ်ဆိုင်းအော်ဒါများသည် အဝယ်ရပ်ဆိုင်းနှင့် အရောင်း ရပ်ဆိုင်းအော်ဒါများကဲ့သို့ ကွဲထွက်သွားနိုင်ပါသည်။
ဈေးနှုန်းသည် အောက်ကျသွားပြီး သေချာတဲ့အဆင့်တစ်ခုကနေ ဈေးတန်းထိပြီး ပြန်ကန်တက်သွားမည်ဟု သင်ယူဆတယ်ဆိုပါစို့။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ ဈေးနှုန်းအတွက် ပြောင်းပြန်လှန်အမှတ်(လက်ရှိပေါက်ဈေး အောက်တွင်)ဖြစ်မည် ဟု သင်ထင်သည့်ဈေးတန်းမှာ BUY LIMIT ထားသင့်ပါသည်။ ဒီအော်ဒါများ၏ လက္ခဏာရပ်များမှာ အနိမ့်ဈေးမှာဝယ်လို့ရခြင်းဖြစ်သည်။
အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ ဈေးနှုန်းအထက် တက်သွားတာကို သင်မြင်ပေမည့်၊ ၎င်းသည် အားကောင်းသည့် ခုခံ(resistance) နဲ့ကြုံပြီး၊ နောက်သို့ပြန်ကန်ပြီး၊ ကျသွားလိမ့်မည်ဟု သင်သေချာနေပါသည်။ ဒီလိုအခြေအနေတွင်၊ လက်ရှိပေါက်ဈေးအထက်တွင် SELL LIMIT ထားသင့်ပါသည်။ ဒီအော်ဒါအမျိုးအစားများ၏ လက္ခဏာရပ်သည် ပိုမြင့်သောဈေးနှုန်းတွင် ရောင်းနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
သင်သည် support (သို့) resistance အဆင့်များကိုကိုင်ထားလိုသည့်အခါတွင် အကန့်အသတ်အော်ဒါများကို အသုံးပြုရမည်ကို မှတ်ထားပါ။
ဆိုင်းငံ့ အော်ဒါများ နောက်ထပ်တစ်မျိုး၊ ရပ်ဆိုင်းအော်ဒါ အကြောင်းကရော ဘာလဲ?
ရပ်ဆိုင်းအော်ဒါများကို အရောင်းအဝယ်တစ်ခု ဈေးနှုန်းကို (သို့) အဆင့်ကို ဖြတ်သွားမည်ဟု မျှော်လင့်သည့်အခါ အသုံးပြုပါသည်။
ဈေးနှုန်းအထက်တက်သွားပြီး၊ သေချာတဲ့အဆင့်တစ်ခုရောက်ပြီး၊ ထို့ထက် ဝေးဝေးထပ်သွားဦးမည်ဟု သင်သေချာသည်ဟု တွေးကြည့်ပါ။ ဒီအနေအထားတွင်၊ လက်ရှိပေါက်ဈေးရဲ့အထက်တွင် BUY STOP ထားသင့်ပါသည်။
ပြောင်းပြန်အနေဖြင့်၊ ဈေးနှုန်းကျသွားပြီး၊ သေချာတဲ့အဆင့်တစ်ခုရောက်ပြီးရင် ပြန်ပြီးဝေးဝေးထိ ကျသွားလိမ့်မည်ဟု အမြင်ရှိတယ်ဆိုပါစို့။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ လက်ရှိပေါက်ဈေးအောက်တွင် SELL STOP ထားပါ။
သင်မေးနိုင်ပါတယ်: ဈေးနှုန်းပြန်ကန်မတက်ဘဲ၊ လားရာတစ်ခုထဲသာ ဆက်ရွေ့နေမည်ဆိုပါက ဘာလို့ ရပ်ဆိုင်းအော်ဒါသုံးသင့်သလဲ? ပိုနိမ့်တဲ့ဈေးမှာ ဝယ်နိုင် (သို့) ပိုမြင့်တဲ့ဈေးမှာ ရောင်းနိုင်ပါတယ်။ အရိပ်အမြွက်တစ်ခု ဒီမှာပါ။ ရပ်ဆိုင်းအော်ဒါကို ဈေးနှုန်း၏ ထပ်မံဦးတည်ရာကို တိကျစွာအတည်ပြုရန် အသုံးပြုပါသည်။ အတွဲသည် သေချာတဲ့အဆင့်ရောက်ရှိပါက၊ ထပ်သွားလိမ့်မည်ဟု သေချာနိုင်ပြီး၊ တနည်းအားဖြင့်၊ သင်ရွေးထားတဲ့အဆင့်မရောက်ခင် ပြန်ကန်တက်နိုင်ပါသည်။
အရေးကြီးအကြံပြုချက်: သင့် ဆိုင်းငံ့နေရာတွင် သင်ရွေးထားသည့်အဆင့်ကို ဈေးတန်းမထိပါက၊ အရောင်းအဝယ် မပွင့်ပါ။ သင့်အမြတ်အတွက် ခြိမ်းခြောက်မှုကြီးကို ဒီနေရာတွင်ဖုံးကွယ်ထားပါသည်။ သင့်အော်ဒါအကောင်အထည်မပေါ်ပါက ပိတ်သင့်ပါသည်။ တနည်းဆိုရသော်၊ သင်ဒါကို မေ့ထားနိုင်ပြီး၊ အရောင်းအဝယ်တစ်ခုသည် သင်မလုပ်ချင်တဲ့အခါ ပွင့်ပါလိမ့်မည်။ ဖြေရှင်းနည်းများထဲမှတစ်ခုမှာ သင့်ဆိုင်းငံ့အော်ဒါများအတွက် ကုန်ဆုံးချိန်သတ်မှတ်ပေးဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်ရသော်ာ၊ ဆိုင်းငံ့အော်ဒါများသည် သင့်အားစိုက်ထုတ်မှုနှင့် စခရင်ရှေ့ကအချိန်ကိုလျှော့ချရန် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ဆိုင်းငံ့အော်ဒါများသည် ဈေးနှုန်း၏ အနာဂတ်လားရာမှာ သေချာအောင်နှင့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကောင်းဆုံး ဈေးနှုန်းအနေအထားတွင် သင့်ကိုဈေးကွက်အတွင်းဝင်ရောက်ခွင့်ရအောင်ကူညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါသည် သင့်အရောင်းအဝယ်ကို ပိုတိကျပြီး၊ ပိုအမြတ်ရအောင်လုပ်ရန် နည်းလမ်းကောင်းကြီးတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်!
25.10.2018 11:19 Alexander Elder ထံမှ အကြံပြုချက်များ: သင့်စိတ်ခံစားချက်ကို စိုးမိုးပါ
"အောင်မြင်သောရောင်းဝယ်သူတစ်ဦး၏ ပန်းတိုင်မှာ၊ အကောင်းဆုံးသော အရောင်းအဝယ်များပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ငွေသည် အဓိကမဟုတ်ပါ။"
23.10.2018 10:48 ပမာဏ(အတွဲ)အညွှန်းကိန်းများအား အရောင်းအဝယ်တွင် ဘယ်လိုသုံးရမလဲ?
သင်သည် စတော့ရှယ်ယာများရောင်းဝယ်ပါက၊ စတော့အိတ်ချိန်းများမှ ထောက်ပံ့ပေးသည့် အရောင်းအဝယ်ပမာဏအကြောင်း အချက်အလက်များရရှိပါသည်။
ပညာရေး နည်းပညာ(ta) သုံးသပ်ချက်
22.10.2018 15:31 ဈေးလမ်းကြောင်း အရောင်းအဝယ်နှင့် ဈေးလမ်းကြောင်းကို ဆန့်ကျင်ပြီးရောင်းဝယ်ခြင်း
နည်းပညာသုံးသပ်ချက်၏ အခြေခံမူများထဲမှ တစ်ခုမှာ ဈေးနှုန်းသည် ဈေးလမ်းကြောင်းတွင်သာ ရွေ့လျှားတတ်ကြသည်။